Izindaba - Inkanyezi ye-6thC izovulwa eSNIEC ngoSepthemba 02, 2020
Inkanyezi ye-6thC izovulwa e-SNIEC ngoSepthemba 02, 2020
Abahlinzeki bezixazululo ezisezingeni eliphakeme abayi-140 + abavela emikhakheni emihlanu, kufaka phakathi okufakwa ezitolo nemishini yokuthenga, ukwakheka kwesitolo, ukuthengisa okubonwayo, ubuchwepheshe bokuthengisa okukhanyayo, imishini yokukhanyisa, iresiphi nemishini yamahhotela nohlelo lwefriji, bancintisane, bese baqala isahluko esisha kwezentengiso. Ozakwethu abaningi abavela embonini babuthana khona lapho ukuze baqonde izitayela zemboni, bafune abalingani futhi baxoxe ngomkhuba wentuthuko wesikhathi esizayo
Njengomlingani wamasu we-C-STAR, opharetha ohlanganisa umhlobiso, ukwakhiwa nokuphathwa kwezitolo --- Chang Hong, ubesembukisweni amahlandla ayisithupha. Kulo nyaka, sihlangane futhi (idokodo i-N1B46), sethula indawo entsha yokuthengisa ekhaliphile
I-CH isebenzisa imininingwane kanye ne-BIM Technology ukubona ukuhlanganiswa kwezinhlobo ezimbili zokwakhiwa kwesitolo kwezohwebo ngokuhlanganiswa nokuhlanganiswa komkhiqizo ohlakaniphile, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukanisiwe zokwakhiwa kwesitolo kwamabhizinisi emikhiqizo, kuthuthukisa ngempumelelo ikhwalithi yesitolo kanye nezinzuzo zezomnotho, kukhulisa imvelo yokuthengisa nokwenza ngcono isipiliyoni samakhasimende. Okuhehe izethameli eziningi nabangane bezindaba ukuthi bame baxoxe
Ngasikhathi sinye, u-CH uphinde wethula ukusakazwa okubukhoma oku-inthanethi ngosuku lokuqala, ethula izithombe ezinhle kakhulu ngesikhathi kubantu abangakwazi ukuza endaweni yesehlakalo futhi babelane ngolwazi lwangaphambili lomkhakha.
Ekuseni kowe-2, ngaphansi kokuqondiswa koMqondisi Wezokuklama uNkk. Wang Guiling no-Chief Engineer uMnu Wu Xinwei, sibuke i-C-STAR 2020 embukisweni okhokhelwayo wamafu emikhakheni emihlanu emikhulu, i-smart retail future pavilion, iwindi lokuqala inselelo yokumaketha, njll. Ukufunda izitayela zakamuva zomkhakha. Ntambama, simeme uMqondisi we-R & D uMnu ZhangWei, isikhungo se-BIM GM Mnu. CuiYaoto wabelana ngezicelo ze-BIM ezitolo zezentengiselwano nezentengiselwano ezihlakaniphile: ubuhlakani bemakethe, bethula ingcweti yobungcweti nobunzulu.